अन्ततः मलेसियामा कामदार अभाव पछि यस्तो कदम चाल्यो ! - jagritikhabar.com
अन्ततः मलेसियामा कामदार अभाव पछि यस्तो कदम चाल्यो !
नेपाली श्रमिकको श्रम गन्तव्य रहेको मलेसियाले नयाँ विदेशी कामदार लिने भएको छ । को’रोनाको कारण लामो समयदेखि बन्दका कारण कामदार अ’भाव भएपछि नयाँ कामदार लिन लागिएको हो।
मलेसियाका गृहमन्त्री दातोक श्री हमजाह जैनुद्दीनले पछिल्लो समय को”रोनाले मलेसियाको प्लान्टेशन सेक्टरमा कामदारको अभाव भएको भन्दै अब विदेशी कामदार भर्ना गरिने बताएका छन् ।
नयाँ विदेशी कामदारले मलेसिया प्रवेश गर्दा अनिवार्य ७ दिन सरकारले तोकेको होटेल क्वा”रेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ। क्वा”रेनटाइनको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने जनाइएको छ ।
मलेसियाले नोभेम्बरबाट भने केही क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकका लागि खुला गर्ने भएको छ । मलेसियाले कोरो’नाको खोप लगाएका र उच्च स्तरका पर्यटकको आवागमनलाई प्राथमिकता दिने भएको हो ।
मलेसिया सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि रोकिएको रोजगारी नेपाली कामदारका लागि पनि खुल्ला भएको छ । अब नेपालबाट पनि सहज रूपमा रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाइनेछ। मलेसियाले विदेशी कामदार लिनेबारे त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले भने कुनै सूचना जारी गरेको छैन।
कामदारको सेवा सुविधा नदिने रोजगारदाताको पहिचान गर्दै सोक्सो
मानव संसाधन मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा सङ्गठन (सोक्सो)लाई कामदारहरूको सेवा सुविधा भुक्तानी नगर्ने रोजगारदाता कम्पनीहरूको अनुगमनलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएको छ ।
मानव संसाधन मन्त्री डाटुक सेरी एम सरावननले सोक्सोलाई छिट्टै समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । अब सोक्सोले चाँडै कामदारप्रतिको दायित्वलाई बेवास्ता गर्ने रोजगारदाता कम्पनीहरूको पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।
सोक्सोको तत्थ्यांकको आधारमा २ हजार ५ सय भन्दा बढी रोजगारदाता कम्पनीहरूले कामदारले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको मन्त्री सरावननलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यम एनएसटीले जनाएको छ ।
मलेसियामा कामदारले एउटा निश्चित समयावधि भित्र रोजगारदाता कम्पनीमा रहेर सेवा गरेबापत रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत कामदारलाई पेन्सन लगायतका सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्तै विदेशी कामदारको हकमा भने पेन्सन नभए पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
के हो सोक्सो ?
समझदारी भएको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोक्सो) मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन, १९६९ अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । सन् २०१९ को जनवरी १ देखि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकहरू भर्ना गर्दा यस सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहिआएकोमा सोक्सोद्वारा उपलब्ध गराइएको जानकारी अनुसार हालसम्म करिब ३ लाख नेपाली श्रमिकहरू यसमा आबद्ध भैसकेका छन् ।
यस संस्थामा आबद्ध हुनका निम्ति रोजगारदाताले श्रमिकको लागि उसले पाउने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रूपमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । विगतमा एफडब्लुसीएसमा आबद्ध भएका श्रमिकको हकमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्मका लागि एफडब्लुसीएको म्याद समाप्त भएको अर्को दिन सोक्सोमा दर्ता गराउनुपर्ने नियम रहेको थियो ।
तर १ जनवरी २०२० पश्चात् भने सबै रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य रूपमा यस संस्थामा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसै अनुसार हालसम्म ४ लाख भन्दा बढी रोजगारदाता र ७० लाख भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेका छन् । मलेसियाभर यस संस्थाका ५४ कार्यालयहरू रहेका छन् ।